आफ्नी आमाका लागि बेहुला खोज्दै यी युवती - Kavre Online
उनले आमाका लागि वरको खोजी गर्दै सम्भाव्य उम्मेदवारका सन्दर्भमा केही शर्त पनि राखेकी छिन् । उनका अनुसार उनको हुनेवाला पिता शाकाहारी हुनुका साथै रक्सी नपिउने हुनु आवश्यक छ । यसका साथै आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनु पर्ने शर्त पनि उनले राखेकी छिन् । कानून विषयकी छात्रा रहेकी ती युवतीको उक्त ट्वीट निकै भाइरल बनिरहेको छ ।
धेरै ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले त्यसमा लाइक, रिटि्वट तथा कमेन्ट गरिरहेका छन् । धेरै प्रतिक्रियाहरु भावुक बनाउने खालका पनि छन् । ३१ अक्टोबरका दिन उनले गरेको उक्त ट्वीटमा अहिलेसम्म साढे ५ हजार कमेन्ट्स, साढे ६ हजार रिट्वीट र २८ हजार लाइक्स प्राप्त भैसकेका छन् । प्रतिक्रिया दिनेमध्ये कतिपय पुरुषहरुले त आफु आस्थाको पिता बन्न तयार रहेको बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
Prevयी बालिका जसले खाजा खाने पैसा जम्मा गरेर गरिन अ’नाथ बालबालिकाको सहयोग (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextसकुसल ड्युटी सकेर सुतेका इन्सपेक्टर अभिशेक थापाको निधन !
ऋषि धमलाको गोडाको पानि खाएको फोटो भाइरल भएपछि एलिजा रुदै मिडियामा यसो भनिन
तीन करोड नेपालीलाइ चकित पार्ने अलौकिक माता भेटियो (भिडियो हेर्नुहोस )
रबिको दिन सकियो, २६ दिनपछि जन्मकै’द हुन्छ, समर्थकहरु दानव हुन् भन्ने को हुन् यी पुर्व लडाकु? (भिडियो सहित)